Yandisa iTrafiki yeeNjini zokuKhangela
Ngaba ingcali yakho ye-SEO inyuse iTrganic Traffic 84%?
NgeCawa, uDisemba 27, 2009 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
Kule veki bendikhuthazekile ukuba ndenze uphando xa ndibone i Ingcali ye-SEO ukunyuselwa kwiwebhusayithi yenye inkampani. Inkqubo ye- Isikhulu se SEO Umbuzo unebhlog ekudala ikho iminyaka engaphezulu kweyam- ke bendinomdla wokuthelekisa izibalo zethu. Ndidibana nabathengi abaninzi kwiinjini yokukhangela, kodwa andikaze ndizibize ngokuba ingcali.
Kude kube ngoku.
Nditshintsha isihloko sam ngokusekwe kuthelekiso nalo mfo… one SEO kunye neWebhu yokuThengisa kwiWebhu ekudala ikho kunam, idityaniswe nenkampani entle enoluhlu oluhle kakhulu lwabathengi abakhulu abachitha imali eninzi kunye yena.
The SEO Uchwepheshe ayibeki # 1 ngegama elinye elingukhuphiswano.
The Martech Zone Inqanaba # 1 lamagama aphambili angama-31 okhuphiswano.
The SEO Uchwepheshe Uluhlu lwamagama aphambili ali-19
The Martech Zone Izikhundla zamagama aphambili angama-741.
The Ingcali ye-SEO blog ibekwa malunga ne-87,000 nge-Alexa.
The Martech Zone Amanqanaba angama-47,000 ngu-Alexa.
Martech Zone iyaqhubeka ukufunyanwa kwifayile ye- Iibhloko ezili-100 zokuthengisa kwi-Intanethi. Ibhlog yeWebhu yoThengiso lweWebhu ye-SEO ayikho kuluhlu.
Ngapha koko, ukuqala kwam ishishini, my ukugcwala kweinjini yokukhangela eziphilayo ukuya Martech Zone inyuke nge-84%:
Iiblogi ngokwendalo zinomtsalane kwiinjini zokukhangela kuba zibonelela ngeqonga apho ungabhala khona umxholo rhoqo kwaye uwubonise ngendlela elungiselelwe iinjini zokukhangela ukuba zifumane kwaye zikhombe. Akukho nanye kwiindlela endizisebenzisayo eziyimfihlo… eneneni ndizibhalile zonke kwi-eBook yam, Ukubhloga kweSEO kwaye iya kwandisa oko ngencwadi epapashwa kwihlobo elizayo.
Ukuba inkampani yakho ifuna uncedo ngoKwenziwa kweNjini yakho yokuKhangela, ungatsalela umnxeba enye yezo Iingcali ze-SEO… Okanye unganika DK New Media umnxeba… inkampani ngubani yonyuse eyayo i-Injini yokukhangela nge-84% ngaphezulu kweenyanga ezisixhenxe ezidlulileyo. Kukhetho lwakho!
Isifundo, ewe, 'kukuthemba kodwa uqinisekise'. Kungenxa yokuba ingcali eyazibhengeza inebhlog, inkampani okanye nencwadi, ayibenzi babe yingcali. Iziphumo zibenza babe yingcali!
Ukuba ungathanda ikopi ye-eBook yasimahla, vele ubhalise kwibhlog yam nge-RSS okanye nge-imeyile kwaye uza kubona ikhonkco kwintloko yesondlo. Olo nxibelelwano luya kukusa kwiphepha eliza kuvela kwikhonkco lokukhuphela.
tags: Umcebisi we seoIngcali ye seoiziphumo
Sala kakuhleHootsuite, Molo kwakhona kwi-Twitterfeed
Ngomhla wama-28 ku-Disemba 2009 ngo-6: 57 AM
Ufanelekile! Unomxholo olungileyo apha.
Ngomhla wama-28 ku-Disemba 2009 ngo-8: 55 AM
Nam ke 'ndisisikolo esidala' njengoDouglas kwaye ukuza kuthi ga ngoku khange ndivume ukuzibiza ngokuba ndiyingcali… de ndide ndithelekise intsebenzo kunye neziphumo zam kwabo babizwa ngokuba ziingcali kwaye njengoDouglas wothuswa ziziphumo! Ukucaciswa kukho i-PR kwaye ke kukho iziphumo… kwaye ezi zimbini azihlali zihlala kunye.
Ngomhla wama-28 ku-Disemba 2009 ngo-2: 54 PM
Enkosi kakhulu Ben! Ababhali abongezelelweyo bongeze itoni kwincoko apha kwiBhlog yeTekhnoloji yeNtengiso!
Ngomhla wama-28 ku-Disemba 2009 ngo-2: 55 PM
Kungalixesha lokuba uqale ukutshintsha isihloko sakho, Oscar! 😀
Jan 3, 2010 kwi-9: 02 AM
Kuyamangalisa ukuba bangaphi abantu phaya abazibiza ngokuba ziingcali ze-SEO kwaye xa uqokelela idatha malunga neendawo zabo, kuya kufuneka ubuze imibuzo yokuba buphi ubungqina bakho ukuba uyingcali ye-SEO?
Jan 8, 2010 kwi-8: 04 AM
Njani malunga nokubonisa isixhobo okanye ezimbini umthengi anokusebenzisa aka Google Insights okanye i-Alexa kunye nescreen iscreen sokuqinisekisa amanani akho ukuze benze okufanayo xa bejonga "ukuqesha" ingcali yabo elandelayo ye-SEO, umphuhlisi wedatha, njl.
Bafundise ngokwaneleyo malunga nokuloba ukuze babambe kakuhle njengawe.
I-PR vs Inzululwazi yeyona nto ipholileyo ukuyinika abathengi.